Eyona ndlela isebenzayo yokuthandana: zithini kwaye ziluncedo ngalunye | Amadoda aQinisekileyo
Eyona ndlela isebenzayo yokuthandana
IsiJamani sasePortillo | | yokuPhila
Ukuze uhlangane nomntu kule nkulungwane yama-XNUMX, kuya kufuneka uyazi into oyifunayo kwisicelo esiphathwayo. Kule mihla kunzima ukudibana nomntu ukuba akukho ngezi ntlobo zezicelo. Kukho uninzi lwezixhobo ezahlukeneyo ngokokuthanda kunye nendlela yokubalisa. Apha siza kukuxelela into ezona zintle zokusebenza Kwaye ukuba injongo yakho kukufumana iqabane okanye umntu onomdla ngothando, izinto ziya kuphucula kakhulu.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi ezona zilungileyo zokuthandana zokusebenza kwaye zeziphi izibonelelo kunye nokungalunganga kokusebenzisa nganye yazo.
1 Fumana iqabane namhlanje
2 Eyona ndlela isebenzayo yokuthandana
2.2 Eyona ndlela isebenzayo yokuthandana: iLovoo
2.5 Eyona ndlela isebenzayo yokuthandana: Adoptauntio
Fumana iqabane namhlanje
Kule mihla kunzima ngakumbi ukudlala ngothando namhlanje kunangaphambili. Kukho ukubonelela okuninzi ngakumbi, kodwa kunye neemfuno ezininzi. Umxholo wemidiya yoluntu wenza ukuba ukwazi ukudibana nomntu kube lula kakhulu kunangaphambili. Nangona ihlala ibuhlungu, kunjalo inyani yokuba umzimba wethu kukupakishwa kwemveliso esiyithengisayo. Kukho abo kulula ukuba bakwazi ukunxibelelana nezi zicelo ngenxa yokuba benomzimba olungileyo. Abantu abaninzi bathi ngomtsalane wabo wokuqala ekuqaleni, kodwa njengoko usiya umazi umntu obukade ukunye naye, unokuqonda ukuba akulunganga ukuqhubeka ubazi.
Ngelishwa, ayizizo zonke izinto ezisemzimbeni. Ukuze umntu athathwe njengomtsalane, kufuneka agcine ulungelelwano phakathi komzimba wengqondo. Esi sisiphene esikhulu xa kufikwa ekusebenziseni ezonaapps zibalaseleyo zokuthandana. Ukusuka Akukho sizathu sokuba ubukrelekrele kwihlabathi ukuba awunawo umzimba onomtsalane, kwaye ngokuchaseneyo. Baninzi abantu ababonakala ngokuba nomzimba omangalisayo kodwa isimo sengqondo esishiya sinqweneleka. Iifoto ezibonisiweyo kwiprofayili zibonisa ezo ndawo sifuna ukubonwa kuzo. Ke ngoko, awunyanzelekanga ukuba uthembe ifoto de ube umazi kakuhle umntu.
Umntu uthatha ifoto yeprofayile ukuyifaka kwisicelo kwaye ngokuqinisekileyo yenye yezona foto zibalaseleyo ziye zathathwa emva kwamawaka eefoto ezingaphumelelanga. Xa kuziwa ekudibaneni naloo mntu uyaqonda, kungekuphela nje ukuba ayisiyiyo indlela awayejongeka ngayo kwiifoto, kodwa ukuba ubuntu bakhe bushiya okunqwenelekayo. Ekugqibeleni, Umzimba wethu sisiqulatho esiwohlokayo ngokuhamba kweminyaka kwaye yingqondo nobuntu obuya kusebenza ukugcina ubudlelwane.
Ngenxa yesidingo esikhulayo sokukwazi ukudibana nabantu abatsha kunye nabo bonke ubuzwe, ezinye izicelo zokuthandana zenziwe zizama ukujoyina abantu.
Ezi zicelo zihamba neyona njongo iphambili yokwenza ukuba kube lula kuwe ukudibana nomnye umntu kwaye umisele ubudlelwane kunye nabo. Unokufumana uthando, ubudlelwane obukude, okanye ukuma kobusuku obulula. Masibone ukuba zeziphi ezonaapps zibalaseleyo zokuthandana:
Yenye yezona ndawo zithandwayo zokuthandana kunye nazo ithathwa njengeyona ishushu. Sisicelo esiguqukele kwindlela yokufumana iqabane. Ukusebenza kwayo ekuncedeni ukuba ufumane iqabane liphezulu, kodwa nasekuhlanganeni nabantu abatsha okanye kuya kubakho iqela labahlobo bakho. Unokufumana iiprofayili ezahlukeneyo zabanye abantu kwaye ubone ukuba uyabathanda. Unokufumana ulwazi malunga nezinto abanomdla kuzo kuFacebook kwaye uqinisekise ukuba ukudibana nalo mntu kuya kuba kuhle. Kule mihla isetyenziselwa ngakumbi indawo enye yobusuku kunokukhangela iqabane.
Eyona ndlela isebenzayo yokuthandana: iLovoo
Esinye sezona zicelo zifanelekileyo zokuhlangana nabantu kwindawo yakho. Ungancokola nabo, udlulise iifoto kwaye udibane. Kufuneka ubhalise kwi-Facebook yakho, i-imeyile okanye iprofayili ye-twitter kwaye uqalise ukusebenzisa i-radar ukudibana nabantu abakufutshane nendawo okuyo. Le radar izama ukuba ichaneke kangangoko ukuze kube lula ukudibana kwaye sikhuthaze ukwazana.
Ngenye yezona zixhobo ezilungileyo kakhulu zokuthandana ngenxa udumo analo lweentengiso zikamabonwakude. Sisicelo sabo bonke abo bantu bafuna kwaye bafune uthando lwenene. Isebenza ngenkqubo yokutyumza kwaye izama ukunxibelelana nabo bantu bakholelwa kuthando ekuqaleni kokubona. Ngale ndlela unokunxibelelana naloo mntu ngengxoxo yabucala, nangona ihlawulwe. Loo mntu ugxile ekufumaneni uthando, esi sicelo seselfowuni kufanelekile ukuhlawulela.
Enye yezona zinto zakudala ezikhoyo kweli candelo liphela. Onke loo magqala aqala ukusebenzisa esi sicelo khumbula ukuba iphepha lewebhu. Inabasebenzisi abaphantse babe zizigidi ezingama-200 kwaye ikuvumela ukuba udibane nabantu abatsha kwaye uncokola nabo abelana nabo ngemidla yakhe. Ungadibana nabantu abakungqongileyo kwaye ufumane abanye abantu obaleka kubo xa usiya ekhaya okanye xa usela. Esi sicelo sisebenza ngokwazisa kunye nokujoyina. Ukusetyenziswa kwayo kuye kwancipha ngokuhamba kwexesha kunikwe ukukhula okukhulu okuye iTinder, phakathi kwabanye.
Eyona ndlela isebenzayo yokuthandana: Adoptauntio
Esi sesinye sezona zicelo zibi kuba ngabasetyhini abanamandla okuthatha isigqibo ngamadoda kwaye baphathwa njengeemveliso. Umlinganiso wababhinqileyo wokufuna ukulingana ngokwesini nawo amalungelo njengakulingano ekuhlaleni. Kule meko, amadoda abonwa njengemveliso kwaye Abafazi ngabo abagqiba ekubeni bahlale okanye bangahlali nabo okanye babamkele ukuba nencoko elula. Unokuluhluza uphando lwakho kwii-hashtag kwaye usebenzise i-geolocation ukufumana umntu omfunayo.
Yenye yezonaapps zibalaseleyo zokudlala ngothando kwindawo enesini. Unokuba nenkonzo yendawo ekuvumela ukuba uqhagamshelane nabanye abasebenzisi kwaye uhlale nabo. Yeyona isetyenziswa kakhulu phakathi koluntu lonke lwesini. Kodwa ingxelo yasimahla kunye nohlobo oluhlawulelweyo kunye neenkonzo ezininzi.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nokuba zeziphi ezona zilungileyo zokuthandana zokusebenza kunye neempawu zazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Eyona ndlela isebenzayo yokuthandana
Uyikhuthaza njani indoda
Ezona zixhobo zokuthambisa kwizangqa ezimnyama zamadoda